Pyae Kyaw – AYA Bank
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏ (၄)ကြိမ်မြောက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တည်ထောင်သူ ဦးဇော်ဇော် (Founder and Chairman) မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း၏ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏ အမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စောဦး (Executive Chairman) အား ရွေးချယ်ခံရခြင်းအတွက် ဧရာဝတီဘဏ် အနေဖြင့် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဒါရိုက်တာများမှ မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍအလိုက် လက်ရှိအခြေအနေ အခက်အခဲများကို တင်ပြ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
Posted on May 12, 2021 May 14, 2021 by Pyae Kyaw
AYA Bank ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘဏ်ခွဲများတွင် ၁. ငွေသွင်းခြင်း၊ ၂. ဧရာဝတီဘဏ် စာရင်း အချင်းချင်း ငွေလွှဲခြင်း၊ ၃. ဖုန်းခေါ်ဆိုစာရင်းပေးသွင်း၍ ငွေထုတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်သော ဘဏ်ခွဲစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ချယုံကြည် ဧရာဝတီ ” Your Trusted Partner ”
Posted on April 29, 2021 May 3, 2021 by Pyae Kyaw
AYA Bank ရန်ကုန်မြို့ရှိ ငွေထုတ်ယူနိုင်သော ATM တည်နေရာများဖြစ်ပါတယ်။ AYA Bank ၏ Website , Viber နှင့် Telegram တို့တွင်လည်း ဖော်ပြထားမှာဖြစ်ပြီး သတင်းအချက်အလက်များ အပြောင်းအလဲရှိပါက ထပ်မံ ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted on October 18, 2020 October 19, 2020 by Pyae Kyaw
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည့် (၇၅)ကုတင်ဆံ့ ICU/HDU ဧရာဝတီစင်တာသို့ ဧရာဝတီဘဏ်မှ လိုအပ်သည်များကို ထပ်မံမတည်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ICU/HDU အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ တတ်စွမ်းသမျှ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပြီး ထပ်မံ လိုအပ်ချက်ရှိသော စက်ပစ္စည်း၊ ဆေးဝါးနှင့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ၊ အောက်စီဂျင်စက်များကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဝယ်ယူဖြည့်တင်းလျက်ရှိရာ များပြားလှသော ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်မှ ကျပ်သိန်း(၁၀,၀၀၀)၊ မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီအုပ်စုမှ ကျပ်သိန်း(၅၀၀၀) ထပ်မံ၍ မတည်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ICU/HDU ကို ဆရာကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး ကိုယ်တိုင် အနီးကပ်ကြပ်မတ် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မေ့ဆေးဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာမြစိုးနှင့် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၊ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများ၊ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်း(၁၅၀)ကျော်တို့က စက်ပစ္စည်းကိရိယာ[…]
Covid-19 ကာကွယ်ကုသရေး ဆောင်ရွက်နေသော တောင်ဥက္ကလာပ ဆေးရုံကြီးသို့ ငွေကျပ်သိန်း(၁၀၀)နှင့် လိုအပ်သည့် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ လှူဒါန်း
ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းမှ မအိမ့်မှူးဇော်နှင့် မောင်ရဲမာန်ဇော်တို့သည် Covid-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော တောင်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီး၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် ငွေကျပ်သိန်း(၁၀၀)နှင့် လိုအပ်သော ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများကို ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမော်ဦးထံသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။